Olee otú Igosi Fantom mpụga ike mbanye Data Recovery
Enwere m ike Naghachi faịlụ site Fantom mpụga ike mbanye?
Usoro Fantom mpụga ike mbanye Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
M meghere m Fantom mpụga ike mbanye na kọmputa m, na m hụrụ na fim nile na otu nke nchekwa ndị na-arahụ. Dị m n'aka na m ehichapụ bụla n'ime ha. Nke a bụ otú weird. A gwara m na videos ka bụ na m Fantom ike mbanye na m nwere ike weghachite ha na ụdị ụfọdụ nke utilities. Ọ bụ eziokwu? Ọ bụrụ otú ahụ, olee otú m pụrụ ime nke ahụ?
N'ezie, nke furu efu faịlụ na-dị nnọọ akara dị ka keerughi data na gị Fantom mpụga ike mbanye ozugbo ha na-efu. Ị ka pụrụ weghachite furu efu videos si gị Fantom mpụga ike mbanye, na ọnọdụ ha na-e overwritten site ọhụrụ data na gị mbanye. Nke a pụtara mgbe ị na-ihe ozugbo na n'omume kwesịrị ekwesị, gị nwere ike omume naghachi data si Fantom mpụga ike mbanye.
Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ a Fantom mpụga ike mbanye data mgbake omume na-enyere gị aka naghachi furu efu, ehichapụ, Ị na rụrụ arụ faịlụ site na gị Fantom mpụga ike mbanye na ala. Ya onye ọrụ-enyi na enyi interface na mfe ma dị ike atụmatụ-enyere gị aka naghachi niile faịlụ na ụdị si gị Fantom mpụga ike mbanye, gụnyere oyiyi, videos, ọdịyo faịlụ, akwụkwọ faịlụ na ndị ọzọ.
Ị nwere ike ugbu download a ikpe mbipute iji weghachi data si Fantom mpụga ike mbanye ugbu a.
Nke a ndu na-ejikwara na Windows version nke Wondershare Data Recovery. Mac ọrụ nwere ike ime mgbake na yiri nzọụkwụ kwa.
Nzọụkwụ 1 Họrọ mgbake mode na-amalite Fantom mpụga ike mbanye data mgbake m
Ị ga-ahụ ihe interface na 3 mgbake ụdịdị na a "Wubàtá Iweghachite" nhọrọ mgbe na-agba ọsọ usoro ihe omume na kọmputa gị.
Naghachi furu efu, ehichapụ ma ọ bụ formatted faịlụ site na gị Fantom mpụga ike mbanye, ị nwere ike họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode dị ka a mbụ na-agbalị.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị Fantom mpụga ike mbanye anya n'ihi na furu efu data na ya
Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa ka họrọ gị Fantom mpụga ike mbanye na pịa "Malite" bọtịnụ na window ka usoro ihe omume ike iṅomi ya.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị na-aga na-agbake data si a formatted Fantom mpụga ike mbanye, ị nwere ike họrọ "Kwado Deep iṅomi" nhọrọ ke window.
Nzọụkwụ 3 Naghachi faịlụ site na Fantom mpụga ike mbanye
Mgbe scanning, hụrụ faịlụ gị Fantom mpụga ike mbanye ga-gosiri na window. Ị nwere ike ele faịlụ aha ego otú ọtụtụ gị furu efu faịlụ nwere ike Ewepụtara.
Ugbu a, ị nwere ike nye akara faịlụ ị na-aga iji naputa na pịa "Naghachi" button na-azọpụta ha na kọmputa gị si nkebi.
Cheta na: Biko adịghị na-ndị faịlụ gị Fantom mpụga ike mbanye n'oge mgbake usoro.
Olee otú nkebi ihe android SD kaadị?
Olee otú Igosi Apacer Pen Drive Iweghachite
Olee otú naghachi faịlụ site Cruzer USB na Windows / Mac
> Resource> Naghachi> Olee otú iji Igosi Fantom mpụga ike mbanye Data Recovery